Faah faahin:Dagaal Xoogan oo ka dhacay duleedka Magaalada Baladwayne – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Wararka aynu ka helayno deegaanka Luuq-Jeelow oo dhaca duleedka Magaalada Baladwayne ee Xarunta Gobolka Hiiran ayaa sheegaya inuu halkaasi ka dhacay dagaal udhaxeeyayay Kooxda lamagacbaxday Macawiisleey iyo dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab.
Dagalkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxuu yimid kadib markii ay weerar xoogan ku qaadeen deegaanka Luuq-Jeelow oo ay ku sugnaaayeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab Rag ka tirsan Kooxda Macawiisleey ee ka dagaalanta degmooyin iyo deegaano ka tirsan Hirshabelle.
Xubno ka tirsan Kooxda Macawiisleeyda ayaa waxay sheegeen in dagaalkan ay iyagu qaadeyn kadib markii cabasho uga timid dadka ku sugan Luuq-Jeelow, waxayna intaasi ku dareyn in Al-shabaab ay dagalkan kaga dileyn 7 nin halka ay sidooale sheegen in kuwa kale ay dhawacyo gaarsiiyen.
Sidookale Kooxda Macawiisleey ayaa dhankooda sheegay in hal Nin uu dagaalka kaga dhintay.
Majiro wax war ah oo ka soo baxay Al-shabaab kasi oo ku aadan dagaalkan ka dhacay deegaanka Luu-Jeelow ee Goobolka Hiiraaan.
Sikastaba ha ahate Kooxdaan ayaa dagal ka dhan ah Al-shabaab ka wada Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhaxe degmooyin iyo deegaano ka tirsan oo ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-shabaab.